Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game 2.4.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.4.4 လြန္ခဲ့ေသာ 23 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game
Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ခရစ္စမတ်ကျင်းပဖို့ကျနော်တို့အဆုံးမဲ့တောင်တန်း redecorated ပါပြီ။
အဆုံးမဲ့ဂိမ်းများနှင့်စိတ်ကူးယဉ် RPG Adventures တထောင်တစ်နှစ်ကျော်လွန်ခဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ပျင်းရိ RPG စစ်တိုက်သို့ဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်းဆောင်ကြဉ်း! , ဂိမ်းတိုက်ပွဲကစားအွန်လိုင်း PvP အခန်းကဏ္ဍ Enter ထောင်ထဲကသူဌေးမိကျောင်းကိုတိုက်နှင့်အဆုံးမဲ့တောင်တန်းအတွက်အမှောင်မင်းသား၏နန်းစံအဆုံးသတ်!
သော့ဖွင့်ဖို့အွန်လိုင်း PvP ပွဲနှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ် RPG action ကို, အွန်လိုင်း RPG Guild စစ်ပွဲများနှင့်ဘဏ္ဍာဝပြောသောအဆုံးမဲ့ဂိမ်း Play! အဆမဲ့စိတ်ကူးယဉ် RPG ပါဝါ ups နှင့်သင်၏ဇာတ်ကောင်အဆင့်တက်နှင့်အဆုံးမဲ့စွန်းမှာဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်းများ၏ထိန်းချုပ်မှုယူပါ!
မလှုပ်မရှား clicker ဂိမ်းစက်ပြင်သင်ကိုယ်တိုင်ယူနစ်တက်ပါဝါနှင့်စစ်တိုက်သို့သူတို့ကိုငါစေလွှတ်မည်, သို့မဟုတ်သင်အော့ဖ်လိုင်းနေလျှင်ပင်ပြန်ထိုင်ခြင်းနှင့်ဂိမ်းကိုယ်တိုင်ကကစားစောင့်ကြည့်ကြကုန်အံ့,
ဒီပျင်းရိ RPG မှာတော့အမှောင်၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောမင်းသားအနိုင်ယူဖို့ပျက်ကွက်ပြီးနောက်, Erin Dimension ၏ Knightgage စုစည်းဖို့အထပ်ထပ်ကိုယ်တော်တိုင်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ကတိပြု! အလိုအလျှောက်စိတ်ကူးယဉ် RPG လုပ်ဆောင်ချက်၏ clicker ဂိမ်း Join! အွန်လိုင်း PvP, အလိုအလျောက် RPG Adventures နှင့်ပျင်းရိအရေးယူစောင့်ဆိုင်း!
အဆုံးမဲ့တောင်တန်း Saga2အင်္ဂါရပ်များ:
Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game အား အခ်က္ျပပါ
sunnygo စတိုး016
Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.4.4
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/ef-public/privacy-policy.html
App Name: Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game
Release date: 2019-01-15 06:31:05
လက်မှတ် SHA1: 6E:18:78:E4:FA:0B:86:B6:1E:C7:55:27:2D:68:ED:F1:2C:B2:9B:F5
ထုတ်လုပ်သူ (CN): ekkorr
အဖွဲ့အစည်း (O): ekkorr
Endless Frontier Saga2- Online Idle RPG Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ